Fanontaniana apetrakao foana amin'ny tenanao rehefa mamaky trano | Vaovao IPhone
Amin'ny fotoana anaovana ny jailbreak, indrindra raha vao hanao an'io ianao dia maro ny fanontaniana azontsika apetraka amin'ny tenantsika. Ho antsika izay efa nampiasa azy io nandritra ny taona maro, maro amin'ireo fanontaniana ireo no mazava, saingy misy mpampiasa maro hafa izay maheno sy mamaky ny teny hoe "jailbreak" imbetsaka amin'ny tranokala maro ary tsy mahalala izay mety ho tsy ananany. Angamba ho an'ny sasany amin'ireo mpampiasa ireo, ny zavatra atolotry ny jailbreak dia tsy mendrika, fa ho an'ny maro hafa dia ho mendrika izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hanazava ny sasany amin'ireo fisalasalana ireo toy ny «Inona ny jailbreak?"Na" Fa inona ny jailbreak? ".
1 Inona ny jailbreak?
2 Fa inona ny jailbreak?
3 Foanana ve ny fiantohana?
4 Azonao atao ve ny miverina amin'ny toetran'ny iPhone?
5 Milamina ve ny jailbreak?
Inona ny jailbreak?
Ny fandikana mivantana ny jailbreak dia "mitete", na dia tiako kokoa aza ny mandika azy hoe vaky ny tranom-borona. Amin'ny iOS, ny fizotran'ny jailbreak dia fantatra amin'ny anarana hoe esory ny fameperana apetraky ny Apple, fameperana vitsivitsy izay "heverina", jereo ireo marika nalaina, izay misy mba hiantohana ny filaminana sy ny fahatokisana ny rafitra. Ny zavatra voalohany ataon'ny jailbreak dia manome antsika fidirana amin'ireo vavonin'ny rafitra, izay fantatra amin'ny anarana hoe mpampiasa be loatra. Amin'ny fanaovana izany dia mametraka koa isika Cydia, ny fivarotana fampiharana hafa (malaza kokoa; misy hafa) izay ahafahantsika misintona fanovana sy rindranasa izay tsy avelan'i Apple amin'ny fomba hafa, fa izany dia hazavaina amin'ny fizarana manaraka.
Fa inona ny jailbreak?
Raha nanomboka nilaza tamin'ny fizarana teo aloha aho, ny jailbreak dia miasa mba hananan'ny mpampiasa fifehezana feno ny iPhone, iPod na iPad antsika. Amin'ny ankapobeny dia manala na manokatra varavarana izay ahafahantsika miditra sy mivoaka ary izay tsy azontsika nidirana teo aloha. Fa inona no tiako holazaina? Araka ny efa nolazaiko teo aloha, vantany vao manamboatra jailbreak Cydia, fivarotana fampiharana hafa izahay, dia apetraka. Ary inona no hitantsika ao amin'ny Cydia?:
Tsy avela ao amin'ny App Store ny fangatahana. Ohatra, ny emulator lalao video MAME na PPSSPP dia azo sintonina avy amin'ny Cydia. Araka ny efa fantatrao, ireto emulateur ireto dia tsy tonga any amin'ny App Store raha tsy hoe mampakatra azy ireo camouflaged amin'ny rindrambaiko ny mpandrindra iray, toy ny mpitantana rakitra.
hametraka Tweaks (fanovana). Ny tweak dia fanovana kely (na tsy dia kely loatra) izay afaka manampy antsika amin'ny fametrahana ny sary famantarana ny mpandraharaha antsika hanova tanteraka ny sary iOS amin'ny fomba tsy azonao an-tsaina akory, toy ny:
- Mametraka fifandraisana izay hanova ny sarin'ny solaitrabe.
- Mba hahafahana manova ny Control Center.
- Arovy ny rindrambaiko na araraoty tsy hamono ny iPhone amin'ny Touch ID.
- Ampiasao ny asan'ny bokotra an-trano raha tsy manindry ny bokotra.
- Vohay ny famerana Bluetooth, izay ahafahantsika mandefa rakitra amin'ireo fitaovana tsy iOS.
- Ampio fiasa tsy misy afa-tsy amin'ny maodely farany iPhone.
- Ny fetra, ny eritreritrao.
hametraka fampiharana maimaim-poana. Izany dia efa miankina amin'ny sandan'ny tsirairay.
No. Na dia manana olana aza ianao ka mila mandeha any amin'ny Apple Store dia tsara kokoa ny mandefa azy io tsy misy jailbreak, amin'ny 28 Oktobra nambara ho ara-dalàna indray izany ny fizotran'ny jailbreak any Etazonia, ilay firenena misy ny foiben'i Apple. Noho izany, na dia mamporisika antsika tsy hanao izany aza i Apple, dia tsy afaka mijanona amin'ny fanamboarana fitaovana iOS izy ireo noho ny fisian'ny jailbroken azy io. Izaho aza dia nahalala tranga izay nakana iPhone misy ny jailbreak ary nivadika ho jamba izy ireo. Amin'ny lafiny teknika, ny jailbreak dia dingana tsy mampidi-doza izay mandeha amin'ny rindrambaiko fotsiny.
Azonao atao ve ny miverina amin'ny toetran'ny iPhone?
Eny, isaky ny mila izany isika. Zava-dehibe ny milaza fa raha hanao an'io ianao dia mila mampiasa iTunes na Cydia Impactor, saingy azonao atao ny mamerina amin'ny laoniny ny iPhone, iPod na iPad isaky ny tianao ary averinay any amin'ny fanjakan'ny "factory" azy io, fa miaraka amin'ny iOS farany mbola vita sonia izany. Raha Cydia Impactor no ampiasaina (mbola tsy mifanaraka amin'ny fomba ofisialy amin'ny iOS 9), dia hamerina ilay fitaovana amin'ny kinova izay nisy antsika ihany isika.
Milamina ve ny jailbreak?
Amin'ny loha, eny amin'ny but. Rehefa manomboka ny jailbreak dia tsy maninona na Sinoa io na Pluto, ny ekipa mpanafika mpifaninana dia mamakafaka ilay fitaovana ary mampitandrina raha misy lesoka (indrindra ny fiarovana) izay mety hisy fiatraikany amin'ny mpampiasa. Raha tsy miteny na inona na inona izy ireo dia tsy olana. Tokony hazava izany.
Izany dia nilaza ary araka ny nolazaiko etsy ambony, ny jailbreak dia mamela ny varavarana misokatra ho an'ny rafitray. Inona no dikan'ity? Eny, amin'ny fomba izay ahafahantsika miditra sy mivoaka "toa an'i Pedro ao an-tranony", dia mora kokoa ho an'ny fampiharana ratsy ny manao toy izany. Satria afaka mametraka rindranasa maimaim-poana isika, raha mametraka iray izay hitantsika an-tserasera, ohatra, dia afaka mametraka Angry Birds novaina izay misy malware. Azo inoana ihany koa fa ny malware dia noforonina manokana ho an'ireo fitaovana jailbroken, izay be mpitranga indrindra, ary mety ho voan'ny virus isika raha mametraka tweaks avy amin'ny toeram-pivarotana tsy ofisialy, izay tsy dia mahafehy loatra ny zavatra nakarina ao amin'ny toerana anaovany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Fanontaniana apetrakao foana amin'ny tenanao rehefa mamaky trano
hanni3al1986 dia hoy izy:
Raha manana jailbreak amin'ny fitaovanao ianao, dia tsotra toy ny fanavaozana azy amin'ny alàlan'ny iTunes alohan'ny hitondrana azy any Apple, manana fivarotana aho ary matetika dia "nohavaozina / naverina amin'ny laoniny" ireo fitaovana jailbroken ary efa toy ny orinasa tsy misy jailbreak ry zareo, I Avy any Barcelona aho
Mamaly an'i hanni3al1986
Ny iPhone 6c 4-inch dia ho tonga amin'ny tapaky ny taona 2016 [RUMOR]